पाँच वर्ष सरकार, ५० वर्ष दुई तिहाइको आधार - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
पाँच वर्ष सरकार, ५० वर्ष दुई तिहाइको आधार - योगेश भट्टराई
अहिले राज्यका सबै ठाउँमा खासगरि जनप्रतिनिधिमार्फत हुने सरकार सञ्चालनका सबै ठाउँमा वाम प्रगतिशील गठबन्धनले वर्चस्व कायम गरेको छ । हामी के गर्छौं, कसरी गर्छौं आदि भन्नुपर्ने जति हामीले सबै भनिसकेका छौं । अब हामीले गर्नुपर्ने दिन आएको छ । अब नेपालमा हामीले पाँच वर्ष सरकार चलाउँदा अर्को ५० वर्ष सजिलै दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार चलाउने आधार तयार गर्छौं । हामी बिग्रन्छांै कि, भ्रष्टाचार गर्छौं कि भन्ने धेरैको चिन्ता छ । आजका हाम्रा नेता सामान्य अनि त्यति कमजोर हुनुहुन्न । धेरै लामो संघर्षबाट आएका, वर्षौं जेलनेल, कष्ट सहेर आएका नेताहरू हुनुहुन्छ । सुखसयलबाट आउनुभएका कोही हुनुहुन्न । चामलमा कतैकतै बियाँ त हुन्छन्, केही मान्छे खराब त हुन्छन्, बिग्रन सक्छन् तर हाम्रो पार्टीको आमनेतृत्व पंक्ति अब्बल छ । यसले गलत काम गर्दैन । नेकपा (एमाले) का लागि यो सरकार, यो राजकीय सत्ता कुनै नेताको आलिसान महल बनाउन ल्याएको होइन । सरकार भनेको एउटा साधन हो । नेपाली जनताको जीवस्तर परिवर्तन गर्नका निम्ति यो साधन हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं ।
हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र कसैलाई गर्न पनि दिन्नँ ।’ हामी सुन्छौं, अन्य देशहरूमा भ्रष्टाचार गरेकै कारण कतिपय नेताहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । मैले हालै मात्र पढेको थिएँ, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले यो पाँच–सात वर्षको अवधीमा करिब ३ लाख नेता–कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । अब हाम्रो देशमा पनि एमाले र माओवादी मिलेपछि बन्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा भ्रष्टाचार आरोप लागेको कुनै पनि एउटा सदस्य त्यो पार्टीमा रहन सक्दैन । जब हामी ठीक हुन्छौं, कुनै कर्मचारी, प्रहरी अधिकृत, ठेकेदार कसैले गलत गर्न सक्दैनन् ।
हामी आउने १० वर्षमा नेपालमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्छौं । त्यति क्षमताको बिजुली निकाल्दा ५० लाख मानिसले रोजगारी पाउँछन् । अहिले प्राथमिकताका आधारमा निजगढ, पोखरा, लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदै छौं । त्यहाँ कतिले रोजगारी पाउलान् ? हामी पूर्व–पश्चिम रेल बिछ्याउँछौं । झन्डै १२ सय किलोमिटर रेल बिछ्याउँदा कतिले काम पाउँछन् ? आज नेपालका सबै बाटाहरू एक लेनका छन्, ती चल्दैनन् । हामी मुख्य राजमार्गहरू कमसेकम चार लेनको बनाउँछौं । निजगढ–काठमाडौं फास्टट्र्याक पनि चार लेनको बनाउँछौं । यो १० वर्षमा सयौं मोटर पुल बन्नेछन् । सयौं किलोमिटर मोटर बाटो बन्छन्, पुर्वाधार निर्माण गर्छौं । त्यहाँ कति प्राविधिक जनशक्ति चाहिएला ? त्यसपछि बाध्यताले बिदेसिने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । हाम्रो सरकारले गर्ने यही हो । कांग्रेसले पटकपटक अवसर पायो, तर काम गरेन । आज हामीले इतिहासमै सबैभन्दा सुवर्ण अवसर पाएका छौं । यो अवसरलाई हामी कुनै पनि अवस्थामा चुक्न दिँदैनौं । किनभने, अहिले कोही अमूक नेताको भाग्य र भविष्य बन्दै छैन, तीन करोड नेपालीको भाग्य र भविष्य छ । हामी लाखौं राजनीतिक कार्यकर्ताको सपना यहाँ जोडिएको छ । दुई वर्षपछि हामीले कति किलोमिटर बाटो बनायौं, कति पुल बनायौं, कति बिजुली निकाल्यौं, कति विद्यालय बनायौं, कति अस्पताल बनायौं, दुई वर्षमा हाम्रो आर्थिक अवस्था कहाँबाट कहाँ पु¥यायौं, औसत आयु कहाँ पुग्यो, प्रतिव्यक्ति आय कति पुग्यो, यी सबै तथ्यांक प्रस्तुत गर्नेछौं । हामी जनतालाई झुक्याएर कुरा गर्दैनौं, तथ्यांकसहित बोल्नेछौं ।
अब लगानीको वातावरण बन्नेछ । म भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई भन्न चाहन्छु, अकुपाई गर्ने गरी मात्र आउनुहुन्छ भने त्यो हाम्रा लागि मान्य हुनेछैन तर लगानी गर्ने गरी आउनुहुन्छ भने हामी रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्नेछौं । तर हडप्न मात्रै, अरू तेस्रो देशलाई छेक्न मात्र आउनुहुन्छ भने मान्य हुनेछैन । अरू देशको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । चिनियाँहरूका लागि पनि त्यही हो । यो कम्पनी, आयोजना भारतले लैजाला कि भनेर हडप्न मात्र कोही चिनियाँ आउँछ भने हामीलाई मान्य छैन । बनाउन आउँछ, लगानी गर्न आउँछ भने स्वागत छ । त्यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुनुपर्छ । पैसा लगानी गरेपछि नाफा खोज्छ, नाफा बाँडेर लानुपर्छ । शतप्रतिशत नाफा नेपालमै छाड्नुपर्छ हामी भन्दैनौं । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीलाई कसैले लगानी गर्न माननेन्, हडप्न मात्र खोजे । नेपालीकै पैसाले अर्को वर्ष यो आयोजनाको काम सकिँदै छ । त्यहाँ विदेशीको एक पैसा पनि छैन । बरु नेपालीको पैसामा चिनियाँ कामदारले त्यहाँ काम गरे । यसरी देशभित्रै पनि लगानीको वातावरण बन्दै छ । यसरी हामी हाम्रो देश बनाउँदै छौं ।
हामी यतिबेला पार्टी एकताको चरणमा पनि छौं । यो पार्टी एकता नेपाली जनताको आवश्यकता हो । कोही एमाले बनेर वा कोही माओवादी बनेर यो एकतामा आइरहेका छैनौं । दुवै एमाले र माओवादी हुँ भन्ने धङघङी छाडेर यो एकतामा आइरहेका छन् । यदि त्यो धङधङी बोकेको भए हामी एक ठाउँमा आएर चुनाव नै लड्ने थिएनौं । नेता, कार्यकर्ता, विचार सबै कुराको व्यवस्थापन सही ढंगले भएर यो एकता हुन्छ । दुइटा खोला मिसिएपछि केही तलसम्म दुवै खोलाले आ–आफ्नो साइड च्याप्छन् । तर, निकै तल पुगेपछि खोलाको पानी एउटै हुन्छ । यो एकतामा पनि केही समय आ–आफ्नो साइड च्यापिन्छ, त्यो कुनै ठूलो कुरा होइन । अब अहिले पार्टी एकता गर्दा हामीले पदहरू मिलान गर्छौं । उहाँ एमालेबाट आउनुभएको, उहाँ माओवादीबाट आउनुभएको भन्छौं । तर, सधैं त्यो भनिरहनुपर्दैन । हामी यो पार्टीलाई भावनात्मक ढंगले एक बनाउँछौं । आज अलग चिह्नबाट लड्यौं, अर्को पाँच वर्षपछिको चुनाव चिह्न एउटै हुन्छ । अलगअलग पार्टीबाट चुनाव लड्दा त देशभरि अभूतपूर्व उत्साह आयो, यो पाँच वर्ष मुलुक बनाएर एउटै पार्टीबाट चुनाव लड्दा धेरै ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले मनोनयन नै दिँदैन । किन चुनाव लड्ने हामीसँग ? छाडिदिन्छ । यही हिसाबले हामी पार्टी निर्माण गर्छौं ।
(भारत प्रवास कमिटीको भेलालाई गरिएको सम्बोधनको अंश)